कालीरामको ‘उथलपुथल मन’ – newskiran.com
कालीरामको ‘उथलपुथल मन’
Posted By : newskiran.com Posted On : 2021-06-07 1:37 am Posted On : 2021-06-07 1:37 am
कालीरामको उथलपुथल मन(कथा)
हुन त विचराको कोठामा चामल सकियो होला अनि ग्याँस सकियो होला । मैंले पनि यसो धेरै नसकिने ४-५ हजार त पेश्की बोलाएर दिएको भएनी हुनी । म पनि त्यस्तै हुस्सु छु के ? अलिअलि खल्तीमा पैसा भएनी स्टाफहरुलाई दिनै जान्दिनँ ।एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो पनि ठिकै हो किनकि दिँदा बानी लाग्छ ।यसपालि उसै त पोहोर देखिको फि उठन बाँकि ।स्कुलको भाडा तिर्न नसकेर बेहाल छ ।
घरबेटीले धन्न सहेर बसेका छन् । उनलाई मेरो नतिर्ने सोच होइन । सबभन्दा गाह्रो फि नै उठदैन । एकदिन हो समस्या,महिना, वर्ष हुँदै २ वर्ष लागि सक्यो ।जम्मा २ वर्षको फि हेर्दा १ वर्षको पनि उठेको देखिदैन । धन्न परीक्षा फि र यताउति फि को बिल बनाएर पठाएपछि अभिभावकले आफू नखाएर भनेनी बिलको रकमचाहिँ तिरिदिएका छन् । नतिरुन पनि कसरी नत्र क्लास नै अपडेट गर्दिन क्यारे ।
स्टाफ मातिनेहरु छोडेर जान्छन् । वर्ष भरिमा ८-९ महिनाको त दिएकै छ क्यारे ।यसपालि त साच्चिकै ४ महिनाको तलब खाएर पनि गुपचुप स्कुलको विरोध नै नगरी बसेका छन् मेरा स्टाफहरु ? पुग्न त मेरा स्टाफहरुलाई वर्ष भरिमा ४ महिनाको तलबले नै काफी हुने रहेछ । मेरो ट्याक्टिस ?यस्तै कुरा मनमा खेलाउँदै कालीराम घरमुनि मकै छर्दै थियो ।उ मख्ख थियो ।उसको के थिएन ? प्रशस्त जग्गा जमिन, स्टेसनरी, खाद्य स्टोर,सहकारी,अनि स्कुल पनि । सानो फुटसल राम्रै चलेको थियो ।उता राजनीतिक पार्टीको सदस्यता पनि लिएकै थियो ।पैसा भए त्यतिकै बुद्घि पलाउँछ भन्ने सिदान्त कालीरामले परिपालन गर्दथ्यो । मनमा अनगिन्ती कुराहरु खेलिरहेथे ।
दिमाग अर्को तिर कुदिरहेथ्यो । उसको कोदालो एक्कासी जिप्टियो । खुट्टाको औँला झन्डै छिन्यो ? उ हत्तपत्त मेडिकल तिर लाग्यो ।मेडिकलमा स्वास्थ्य परीक्षण कर्ताको घुइँचो । लाइन बसेरै टेप लगाएर घर फर्कियो ।घाइते खुट्टाले उ कतै हिँडडुल ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌गर्न सक्दैन्थ्यो । घाउ बिसेक हुनै लाग्दा एकदिन उसलाइ एक्कासी ज्वरो आयो । रुघाखोकी त्यस्तै । देशभर कोरोनाको महामारी बिचरा कालीरामलाई पनि कोरोनाले छोएछ ।
कोरोना लागेपछि सामाजिक भावना नै खलबलिदो रहेछ । मर्दा लाने केही होइन।कालीरामको मनमा दया पलाएछ । यदि म मरे भने मेरो कर्तव्यलाई ठिक मान्लान त ? बूढी,आमा बाबा र मेरा छोराछोरीले मेरो लक्ष्य र गन्तव्य बुझ्लान् त यस्तै कुरा खेलाउँदै कालीराम भुसुक्कै निदायो । क्रमशः
फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलको अब प्रतिलिटर १२५
2021-06-24 newskiran.com 0